Isiyingi sokuqhutshezelwa kwesivumelwano sezohwebo lwamazwe ase-Afrika - Bayede News
Isiyingi sokuqhutshezelwa kwesivumelwano sezohwebo lwamazwe ase-Afrika
Kuqopheke umlando lapho izwe iNingizimu Afrika lisingatha okokuqala ingqungquthela yezokuhweba kwamazwe ase-Afrika, i-African Continental Free Trade Area (AfCFTA).
Kuzokhumbuleka ukuthi le ngqungquthela ilandela ukushicilelwa kwesivumelwano samazwe angaphezu kwama-40 ngonyaka ofile. Kancane kancane yize amanye amazwe esadonda, ayangena kulesi sivumelwano kwazise siqukethe okukhulu okungazuzwa yilelo nalelo lizwe eliyingxenye yaso. Lesi yisivumelwano esisho ukuthi ama-Afrika asezokwazi ukubheka ukuthi izwe nezwe liphetheni, futhi lingathengisani kwelinye elikhona e-Afrika kunokuhlala ama-Afrika elanda izimpahla nemikhiqizo ngaphandle.
Okunye okucaciswa yilesi sivumelwano, udaba olulokhu luyinzukayikeyi lwezokumbiwa phansi. Kuzokhumbuleka ukuthi cishe wonke amazwe ase-Afrika zonke izinto ezimbiwa phansi, ayazithatha zingahluziwe zinjalo, aziyise phesheya kwezilwandle ziyohluzwa khona qede zibuye lapha sezimba eqolo. Lapha singabala igolide, amadayimane, nazo zonke izimbiwa zokwakha amapayipi ezimoto nokunye, ngisho nezikhumba imbala. Zonke lezi zinto zibuya sezimba eqolo, okukhulu kakhulu zisuke sezakhele abantu balawo mazwe imisebenzi nomcebo omkhulu. Lesi sivumelwano sisho ukuthi i-Afrika isizoqala ukukwazi ukusebenzisana ngaphakathi emazweni ayo, futhi izokwazi ukubheka zonke lezi zinto nokuqoqa umqondo oyothi ufeze iphupho lokhokho be-Afrika ababekade baqala ukulukhuluma lolu daba.
Ukubanjwa kwale ngqungquthela ungacishe ukufanise nomncintiswano kanobhutshuzwayo, kwazise amazwe afaka izicelo ukuze ayisingathe. UMnu uRavi Pillay, onguMphathiswa woMnyango Wezohwebo esifundazweni iKwaZulu Natal, uchaze wathi “Ngonyaka wezi-2020, izwe iRwanda bekufanele kube yilo elisingatha le ngqungquthela bese kuthi elengabadi liyisingathe ngowezi-2023 ngokwezivumelwano”. Eqhubeka uthe nxa kuqala lo nyaka wezi-2021, ihoxisile iRwanda ngenxa yokwesabela ukuthi angeke lakwazi ukuyisingatha ngendlela eyiyo le ngqungquthela. Yilapho-ke leli, libe selicelwa ukuthi lingeyisingathe yini ngesikhathi nje esifushane. Nembala kulithathe izinyanga eziyisithupha kuphela ukuyilungiselela nokuyisingatha le ngqungquthela. Leli lizwe nesifundazwe iKwaZulu-Natal senze okuncomekayo kakhulu ngesikhathi esifushane nje lazisiwe ngalolu guquko.
Nxa singake sibheke kafushane ngomlando walezi zivumelwano, siyathola ukuthi amazwekazi amaningi anezivumelwano ezifanayo, lapha singabala amazwe ase-India, iChina, i-USA namanye. Umumo walamazwe kwezokubambisana ngohwebo, usesigabeni esikhulu ngaphezu kwamaphesenti angama-50, amanye aze abe ngamaphesenti angama-70. Umbiko wenhlangano yezizwe yezohwebo, iWorld Trade Organisation (WTO), isibikela ukuthi cishe kunezivumelwano ezingama-420 emhlabeni jikelele nxa kukhulunywa ngohwebo phakathi kwamazwe namazwekazi. Okanti lezo ezinkulu cishe ukulinganiswa nalesi sase-Afrika, zimbalwa kakhulu. Okuphawulekayo futhi ukuthi kuzo zonke izivumelwano ezihambisanayo, lesi esizoba ngesikhulukazi ukuzedlula zonke emhlabeni.
Akumangalisi ukuthi kule ngqungqu thela bekuboshelwe hhayi kuphela amazwe ase-Afrika wodwa, kepha amazwe ase-Europe, ama-Arabhu, abekhona ezokhangisa ngemisebenzi ayenzayo, futhi ethunyelwe ohulumeni bawo ukuze azoqaphela ngalesi sivumelwano esizoshintsha ukusebenza kwamazwe abo.
Le ngqungquthela eqale mhla zilishumi nesihlanu kuya mhla zilishumi nesishiyagalombili kuLwezi walo nyaka, ivulwe uMengameli uCyril Ramaphosa. Ibihanjelwe futhi nangoMengameli abacishe bafinyelele eshumini bamazwe ase-Afrika, okuthe ngosuku lwesibili balifulathela leli, beshiya ngemuva ongqongqoshe nezithunywa zamazwe abo. Amaningi ala mazwe ebethumele ngisho osomabhizinisi babo kuleli ukuze bazokhangisa ngemisebenzi abayenzayo emazweni abo.
Izibalo zabangasebenzi zixaka abezinyunyana
Okuhlabe kakhulu umxhwele udaba lwamazwe aziwa njengezikhondlakhondla e-Afrika, phakathi kwawo okuyiNigeria, i-Egypt abekhona amanye eze noMengameli bawo, kanye nalabo asebathatha umhlalaphansi. Yiwo phela la mazwe okumele ahole ekhaleni le mpi nxa kukhulunywa nge-AfCFTA.
Phakathi kokunye, okuye kwabaluleka kakhulu ngale ngqungquthela kube ukwethulwa kohlelo esicabanga ukuthi luzokwenza kubelula kakhulu ukuhweba phakathi kwamazwe olubizwa nge-Africa Trade Observatory (ATO). Lolu hlelo luzosiza ukuthi ngokucindezela inkinobho kwezwe nezwe nje, ukwazi ukuqonda ukuthi kulelozwe kwenzakalani, nanokuthi ungatholani engumkhiqizo wezwe lakho.
Yize i-ATO isaqalwe esigabeni samazwe cishe ayisithupha, isasasa layo, selenze ukuthi amazwe cishe angamashumi amabili afise ukungena kulolu hlelo ngokushesha.
Isivinini sokukhula kwezomnotho we-Afrika, sizoqhutshwa kakhulu yilolu hlelo lwe-AfCFTA, ukuze kukwazi ukwakheka kwamathuba emisebenzi yabantu abaningi kakhulu abasha abangaqashwe ndawo.
nguGugulethu Xaba Nov 20, 2021